bollywood | Namastefilmy.com| Nepali Cinema, News, Gossip ,Articles, Interview, Celebrity, Photo, Songs, Video, More... | Page 3
Home >> bollywood (page 3)
बलिउड अभिनेता सनी देओल दुर्घटनामा
भारतीय जनता पार्टीका लोकसभा उम्मेदवार तथा बलिउड अभिनेता सनी देओल दुर्घटनामा परेका छन् । चुनाव प्रचारप्रसारको क्रममा उनी चढेको गाडी दुर्घटना भएको हो । पंजाबको गुरदासपुरमा भाजपाको तर्फबाट उम्मेदवार रहेका सनीको गाडी सोमबार बिहान दुर्घटना भएको बताइएको छ । दुर्घटना भएको गाडीमा उनी सवार थिए वा थिएनन् भन्ने पुष्टि नभएको भारतीय मिडिया आजतकले लेखेको छ ।
भारतमा लोकसभा निर्वाचन सुरु भएपछि उनी भाजपामा प्रवेश गरेका थिए । उनको क्षेत्रमा भने सातौं चरणमा निर्वाचन हुँदैछ । पार्टी प्रवेश गरेर उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि उनी लगातार गुरदासपुरमा चुनाव प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । उनको प्रचारका लागि भाइ बबी देओल र पिता धर्मेन्द्र पनि गुरदासपुरमा घुमिरहेका छन् ।
साहिद कपूर अभिनित चलचित्र ‘कबिर सिंह’को ट्रेलर रिलिज (भिडियो)
साहिद कपूरको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र ‘कबिर सिंह’को ट्रेलर रिलिज भएको छ ।लभस्टोरी ड्रामामा निर्माण यस चलचित्रको ट्रेलरमा साहिद कपूरजिद्दी र संकी प्रेमीको भूमिकामा छन् । ट्रेलरमा साहिदले पागलपनको हद पार गरेका छन् ।
सन्दीप भांगा निर्देशित चलचित्र ‘कबिर सिंह’ लाई ब्लकबस्टर तलेगु सिनेमा ‘अर्जुन रेड्डी’बाट उतारेका हुन् ।।
सिनेमामा साहिदको अपोजिट कियारा आडवाणी छन् । सिनेमा जुन २१ मा विश्वभरका सिनेमा घरमा रिलिज हुँदैछ ।
‘बाहुबली २’ को रेकर्डलाई तोड्यो अजित कुमारको ‘विश्वासम’ले
अजित कुमार दक्षिण भारतकै सुपरस्टार मध्येका एक हुन्। उनी अभिनित धेरै फिल्महरूले रेकर्ड बनाएका छन्। पछिल्लो समय रिलिज भएको उनको फिल्म ‘विश्वासम’ ले प्रभास, राणा दग्गुबाती स्टारर राजामौलीको बहुचर्चित फिल्म ‘बाहुबली २’ को रेकर्ड तोडिदिएको छ।
वास्तवमा, अजितको ‘विश्वासम’ सन टिभीमा मे १मा प्रसारण गरिएको थियो। मे १ मा अजितको जन्मदिन पनि हो। ‘विश्वासम’मा नयनतारा, जगाती बाबू, थाम्बी रोबोट शंकर र योगी बाबू जस्ता कलाकार देख्न सकिन्छ। रिपोर्टअनुसार मे १ मा मजदुर दिवस भएका कारण दर्शकको वृद्धि भएको थियो।
करिब १ करोड ८० लाखले फिल्म हेरेका थिए। यो ठूलो रेकर्ड हो। फिल्मको निर्देशन सिरुथाई शिवाले गरेका हुन्। फिल्मले बक्स अफिसमा ठूलो सफलता हात पारेको थियो। फिल्म धेरै सिनेमाघरमा ६ हप्तासम्म हासफूल भई रिलिज भयो।
सलमान खान र दिपिकाको जोडी पहिलोपटक ‘किक टु’ मा काम गर्ने !
दीपिका पादुकोण आजकाल रिप्लेसमेन्टका लागि चर्चामा छाइरहिन्छन् । हालै, उनले अनुराग बसुको ‘इमली’ फिल्ममा कंगना रनोटलाई रिप्लेस गरेको खबर आएको थियो । अब चर्चा यो छ कि उनले सलमान खानको ‘किक टु’ मा ज्याकलिन फर्नान्डिजलाई रिप्लेस गर्ने भएकी छिन् । स्रोतलाई मान्ने हो भने दीपिकालाई किक टुका निर्माताले फिल्मका लागि एक महत्वपूर्ण भूमिकाका लागि कुरा गरिरहेका छन् ।
यो फिल्मको पहिलो भाग साजिद नाडियाडवालाले निर्माण गरेका थिए र उनले गत वर्ष किक टुको घोषणा गरेका थिए । यद्यपी, स्क्रिप्ट तयार नहुँदा र सलमान व्यस्त भएकाले फिल्म रोकिएको थियो । अब स्क्रिप्ट तयार भइसकेको छ सलमान चाँडै नै यसका लागि नायिकालाई फाइनल गर्ने तयारीमा छन् । यसैबीच दीपिकालाई पनि फिल्ममा अनुबन्ध गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
स्मरण रहोस्, दीपिकालाई यो फिल्मको पहिलो पार्ट किकका लागि पनि अप्रोच गरिएको थियो तर व्यस्त समयतालिकाका कारण उनले फिल्ममा अभिनय गर्न सकेकी थिइनन् । यसअघि भंसालीको फिल्म ‘इंशाअल्लाह’ का लागि पनि दीपिका सलमान देखिने चर्चा थियो तर फिल्ममा आलियाको इन्ट्री भयो ।
ज्याकलिनलाई दीपिकाले रिप्लेस गर्ने खबरबीच यो पनि चर्चा छ कि फिल्ममा दीपिका र ज्याकलिन दुबै सँगै पनि देखिनसक्छन् । यो फिल्ममा दीपिकाको भूमिका शक्तिशाली हुने पनि बताइएको छ । दीपिका र ज्याकलिन यसअघि पनि ‘रेस टु’ मा सँगै काम गरिसकेका छन् ।
‘सत्ते पे सत्ता’को रिमेकमा शाहरुख खान र कट्रिना कैफ
अमिताभ बच्चनको चर्चित पुरानो फिल्म सत्ते पे सत्ताको रिमेक बनाउने तायरी भएको छ । सत्ते पे सत्ताको रिमेकमा शाहरुख खान र कट्रिना कैफको जोडीले अभिनय गर्ने भएको मिडिया रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । यस फिल्मलाई फराह खान र रोहित शेठीले रिमेक गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
शाहरुख र कट्रिनाले यस अघि जब तक है जान र जिरोमा अभिनय गरेका थिए । शाहरुख र कट्रिनाका अलावा यस फिल्ममा संजय दत्तले समेत अभिनय गर्ने भएको बताइएको छ । यस फिल्ममा सात भाईको आपसी सम्बन्धको कथा हुने छ । रिमेकमा सिद्धार्थ मलहोत्रा, कुनाल खेमु, तुषार कपुर र श्रेयस तलपडे लगायतका कलाकारले अभिनय गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
सत्ते पे सत्ता यस अघि मराठी भाषामा पनि बनिसकेको छ । यस फिल्ममा अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अमजद खानलगायतका कलाकारले अभिनय गरेका थिए ।
बलिउड अभिनेता सलमान खान प्रियंका चोपडाप्रति अझै पनि रुष्ट
बलिउड अभिनेता सलमान खानले लाइभ अन्तर्वार्तामै अभिनेत्री प्रियंका चोपडासँग फिल्म ‘भारत’ को विषयमा भएको विवादको बारेमा बोलेका छन् । ‘दबंग –३’ को शुटिङमा र फिल्म ‘भारत’ को प्रमोशनको काममा व्यस्त रहेका सलमान खान र अभिनेत्री कैटरीना कैफको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा यतिबेला निकै भाइरल भइरहेको छ ।
केहि दिन अगाडि सलमान र कैटरीनाले फिल्म निर्देशक अली अब्बास जफरसँग ट्विटरमा लाइभ अन्तर्वाता गरेका थिए । उक्त लाइभमा अलीले ट्विटरमा आएका दर्शकका प्रश्नको जवाफ पनि दिएका थिए । त्यसैक्रममा सलमानले दिएको जवाफले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको थियो ।
सलमानको जवाफमा उनी प्रियंकाप्रति अझै पनि रुष्ट रहेको स्पस्ट झल्किन्थ्यो । फिल्ममा नायिकाको भूमिकामा सुरुमा प्रियंकालाई लिइएको थियो तर उनले समय नदिएको कारण देखाउँदै उनलाई हटाएर कैटरीनालाई भित्र्याइएको थियो । यो फिल्मको भूमिका निभाउन कैटरीनालाई कति मेहेनत गर्नुपर्यो भन्ने दर्शकको प्रश्नको जवाफमा सलमानले उनले कडा परिश्रम गरेको र यदि प्रियंकाले पनि समय दिएको भए … । उनी अझै पनि फिल्ममा प्रियंकालाई हटाउनु र प्रियंका हट्नुप्रति असन्तुष्ट रहेको स्पष्ट थियो ।
सलमान खानको फिल्म ‘भारत’ जुन ५ मा रिलीज हुँदैछ । जसमा सलमान खान, कैटरीना कैफ, दिशा पटानी, सुनील ग्रोवर, ज्याकी श्राँप, नोरा फतेही जस्ता कलाकारको मुख्य भूमिका रहेको छ ।
सलमानको ‘इन्शाअल्ला’ र अक्षयको ‘सुर्यवंशी’को भिडन्त? फिल्मको लागि सलमानले अक्षयलाई फोन गरे
बलिउडका दुई प्रतिक्षित चलचित्र ‘सुर्यवंशी’ र ‘इन्शाअल्ला’ एक साथ रिलिज हुने कुराले निकै चर्चा पाइरहेको छ । नायक अक्षय कुमार अभिनित ‘सुर्यवंशी’ र नायक सलमान खान स्टारर ‘इन्शाअल्ला’ दुबै चलचित्रले सन् २०२० को इदलाई आफ्नो रिलिज मिति तय गरेका छन् ।
इद सलमान खानको लागि पेवा रिलिज मिति जस्तै भएको छ । केही वर्षदेखि सलमानले निरन्तर रुपमा इदमा नयाँ चलचित्र रिलिज गर्दै आइरहेका छन् । तर, सन् २०२० मा सलमानले नयाँ चलचित्र घोषणा गर्न नभ्याउँदै अक्षयले ‘सुर्यवंशी’को रिलिज मिति पक्का गरिदिएका थिए ।
यसै बिषयमा कुरा गर्न सलमानले अक्षय कुमारलाई फोन गरेका छन् । सलमानले अक्षयलाई फोन गरेर कुनै पनि हालतमा दुई चलचित्र एक साथ रिलिज हुन नदिने बताएका छन् । बलिउड मिडियाका अनुसार सलमान पनि दुई चलचित्र एकसाथ रिलिज नगर्ने पक्षमा छन् ।
केही समय पहिला नायिका कट्रिना कैफले पनि सलमान र अक्षय कुमारको भिडन्त नहुने बताएकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘सलमानले अक्षय कुमारलाई निकै माया गर्छन् । सायद सलमान र अक्षय कुमारको चलचित्र एकसाथ रिलिज हुदैन होला ।’
सलमान खानले उक्त मितिमा चलचित्र एकसाथ रिलिज हुन नदिने बोलिरहँदा के सलमानले आफ्नो मनपर्ने चाडलाई छाड्छन् होला त ? यदी उक्त मितिमा सलमानको चलचित्र नआए अर्को कुन मितिमा आउन सक्ला त ? यो प्रश्नहरु अहिले उठिरहेका छन् । तर, यस विषयमा सलमान भने मौन छन् ।
रानी मुख्रजी अभिनित ‘मर्दानी २’ को पहिलो लुक्स सार्वजनिक
बलिउड अभिनेत्री रानी मुख्रजी अभिनित‘मर्दानी २’को पहिलो झलक सार्वजनिक भएको छ । छायांकन सुरु भएसँगै फिल्मको पहिलो लुक्स सार्वजनिक गरिएको छ ।सार्वजनिक फोटोमा उनलाई एक प्रहरी अधिकारीको पोशाकमा देखाइएको छ ।
यशराज फिल्मसले ट्वीटरबाट रानीको तस्वीर सार्वजनिक गरेको हो । मर्दानीको लेखक यो फिल्मबाट गोपी पुथरन निर्देशनमा डेब्यु गर्दैछन् । यो फिल्म यसै वर्ष रिलिज हुनेछ । तर रिलिज डेट तय गरिएको छैन ।
रानी गत वर्ष ‘हिच्की’नाम सिनेमामा देखिएकी थिइन् ।सो सिनेमाले भारतीय वक्सअफिसमा खासै राम्रो गर्न नसकेपनि चिनियाँ वक्सअफिसमा भने गतिलो कमाइ गरेको थियो । ‘मर्दानी’ सिनेमा सफल भएपछि सिक्वल बनाउन लागिएको हो ।
बाहुबली अभिनेता प्रभाष चलचित्र ‘साहो’को सुटिङका लागि मुम्बई पुगे
बाहुबली अभिनेता प्रभाषको फ्यान फलोइङ विश्वभर फैलिएको छ । बाहुबली र बाहुबली–२ ले अभिनेता प्रभाषको जीवनमा नयाँ मोड ल्याएको छ । यसरी दुई फिल्म सुपर डुपर हिट भएपछि उनी बलिउड डेब्युलाई लिएर पनि निकै चर्चामा आएका थिए ।
प्रभाषको आगामी फिल्म ‘साहो’ हो । दर्शकहरुको लागि यो पखाईको फिल्म बनेको छ । यो फिल्ममा प्रभाषको अपोजिटमा बलिउड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर देखिदै छन् । अहिले यसै फिल्मको बाँकी सुटिङको लागि अभिनेता प्रभाष मुम्बई पुगेका छन् । उनको भाइरल बनिरहेको एक भिडियोमा आफ्नो फ्यानहरुसँग सेल्फी खिचाइरहेका छन् ।
भिडियोमा प्रभाष सिम्पल लुकमा देखिएका छन् । निकै कुल देखिएका छन्, भने उनले चश्मा लगाएका छन् । कलाकार नील नील नितिन मुकेश पनि साहोको टिममा जोडिएका छन् । उनको इन्स्टाग्राम पोष्टले यही भनिरहेको छ । उनले इन्स्टाग्राममा पोष्ट गरेका तस्वीरमा अभिनेत्री श्रद्धा कपूर र निर्देशक सुजितसँगै देखिएका छन् ।
यो फिल्म २०१९ कै स्वतन्त्र दिवसको अवसरमा दर्शकमाझ रिलिजमा आउँदैछ । फिल्ममा ज्याकी श्राफ, आदित्य श्रीवास्तब, टीनू आनन्द, मन्दिरा बेदी र चंकी पाण्डे लगाएतका कलाकारहरुको पनि मुख्य भूमिका हुनेछ । यो फिल्मको मुब्बई शेड्युलको सुटिङ सुरु भइसकेको छ । यो भन्दा पहिला साहोको सुटिङ इटाली, अबुधाबी र हैदरबादमा भइसकेको छ ।